Tinye ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ aha netwọkụ
Tụlee Tụlee 0
Laghachi na nchọta
Nkwupụta Asụsụ nke Ndị Na - amụ Bekee
Collegelọ akwụkwọ na Njikere Njikere
Studentga Nwata akwụkwọ
Ndepụta ụlọ akwụkwọ
Kedu ka esi kpebie akara ụlọ akwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ a?
Schoollọ akwụkwọ ọ bụla na-enweta akara maka ihe ngosi niile metụtara. A na-atụ aro maka akara ndị a maka imepụta akara ikpeazụ nke mkpụrụedemede AF, dabere n'ọkwa 0-100. (Isi mmalite data: 2018-2019 afọ akwụkwọ) Mụtakwuo
Ihe ngosi a na-egosi ike nwata akwụkwọ maka ọkwa ọkwa ọkwa na Bekee / Asụsụ Arts na Mgbakọ na ụlọ akwụkwọ ahụ.
Ihe ngosi a tuputara uto nwata akwụkwọ na ogo mmụta na ụlọ akwụkwọ. Nwa akwụkwọ ọ bụla na - enweta isi ihe dabere n'ụdị eto eto gosipụtara (uto dị ala, ụdị mmepe, uto dị elu). A na-ekenye ntụpọ site na iji uto na tebụl proficiency. Schoolslọ akwụkwọ nwere ike ịgafe akara 100 n'ogo a.
Ngụsị akwụkwọ na Mahadum na Njikere Ọrụ
Ihe ngosi a tuputara akara umu akwukwo nke umu akwukwo n’agbata afọ anọ na ise n’ulo akwukwo, na akwukwo umu akwukwo na-egosi iguzosi ike nke ulo akwukwo.
Ngalaba Mmụta Indiana
Chọta Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ na Corporationlọ Ọrụ
Kwadoro site na Hoonuit